Threatened Voices: Tahiry Ho Fandraketana Ireo Fandrahonana Fanehoan-kevitra Antserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2017 5:08 GMT
Mikendry hanohana ireo bilaogera, mpilaza tantara, mpanao gazety ary ireo hafa izay manao ny asa fiarovana ny zontsika haneho hevitra an-kahalalahana amin'ny alàlan'ny fikatrohana ataon'izy ireo sy ny asan'izy ireo ny tetikasa vaovao farany an'ny Global Voice, Threatened Voices (Feo Voarahona).
Nampahafantatra ny tetikasa tamin'ny alalan'ny fanomezam-boninahitra ireo olona vitsivitsy izay niasa tamim-pahasahiana ho an'ny fahalalahana miteny ny ekipa. Anisan'izany ireto tononina manaraka ireto:
Avijit Roy bilaogera Amerikana-Bangladeshita maty nisy namono tao Dhaka
Mahlet Fantahun nandany 18 volana an-tranomaizina tao Ethiopia noho ny fitsikerany ny governemanta
Mpanao gazety Meksikana Cecilio Pineda Birto maty nisy nitifitra tao Guerrero tamin'ity taona ity, rehefa avy namoaka lahatsoratra momba ny heloka bevava, ny olana ara-tsosialy ary ny kolikoly.
Atena Farghadani izay nogadraina tao Iran noho ny sariitatra nataony momba ny fanabeazana aizana
Nanjavona tao amin'ny fonjan'i Syria taona maro lasa izay ilay bilaogera Palestiniana-Siryana Bassel Khartail Safadi ary voalaza fa maty volana vitsy monja lasa izay
We remembered Bassel Khartabil Safadi, Palestinian-Syrian hero killed by the Assad regime, during the threatened voices moment at #GV2017#SriLanka@globalvoices@Trace_LKpic.twitter.com/ToKaoRGdO8
Nahatsiaro an'i Bassel Khartabil Safadi, maherifo Palestiniana-Syriana novonoin'ny fitondran'i Assad, nandritra ny fotoana niresahana ny feo voarahona tamin'ny #GV2017#SriLanka@globalvoices@Trace izahay
“Niasa mba hilaza tantara, hiaro ny zon'olombelona, ary hitazona ny tompom-pahefana hanao adidy ireo olona rehetra ireo”, hoy ny talen'ny Global Voices Advocacy Ellery Biddle taminay.
*Shivers* here at #GV2017 as we remember the courageous bloggers, @GlobalVoices members, storytellers, and activists who have been imprisoned, silenced, tortured, and killed because of their actions.#threatenedVoices#gvsummit17
*Mihoro-koditra* izahay eto amin'ny # GV2017 raha nahatsiaro ireo bilaogera feno herim-po, ireo mpikambana ato amin'ny @GlobalVoices, ireo mpilaza tantara ary ireo mpikatroka izay nogadraina, notampenam-bava, nampijaliana sy novonoina noho ny hetsika nataon'izy ireo. #threatenedVoices#gvsummit17
Jereo ny tetikasa vaovao Threatened Voices avy amin'ny Global Voices.